Shirka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed
Shirka sharqanta yar ee dhawaan loo ballansan yahay in lagu qabto 15/07/07 magaaladda Xamar, ayaa waxaa lagu tilmaami-karayaa inuu yahay kii ay shacabka Soomaaliyeed ugu baahida badnaayeen inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah. Waxaanna sabab u ah rabitaankaas iyada oo guud ahaan dadka iyo dalkuba marayaan marxalad aad u adag , midaas oo saamayn weyn ku yeelatay dhamaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, arimaha bulsheed, xaalufin iyo qashin ku shubid.
Sidoo kale shirkaani waxuu ku soo beegmay xili ay dagaalo maalinkasta ka dhacayaan magaalada Xamar ee ah goobta shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto. Sidaas daraadeed waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay shirkii ugu amaanka xumaa markii la isu geeyo shirarkii magac ahaanta ee dib-u heshiisnta Soomaaliyeed.
Si aan qiimeyn iyo saadaalin igu sameyno waxii ka soo bixikara shirkaas, talana ku biirino, waxaa lama huraan ah in aan dib u fiirino shirarkii faraha badnaa ee la maqaar-saaray magaca � dib-u-heshiinsiinta Soomaaliyeed� ee uu ugu horreeyay shirkii lagu qabtay dalka Jabouti intii u dhexaysay 5-11 bishii Juun 1991, uuna u danbeeyay kii labada sannadood qaatay ee lagu qabtay dalka Kenya ,laguna soo dhisay DFKS 2004. Shirarkaas oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxay ka ahaayeen marti dabacsan, maadaama ayan waxba ku laheyn dhaqaalaha ku baxayay. Sidoo kalana aysan saameyn weyn ku laheyn go`aamada shirarkaas ka soo bixi jiray. Dhamaantood shirarkii hore waxay ka mideysnaayeen:
Qorshe la`aan iyo in aysan caddeyn ujeedooyinka dhabta ah ee shirka,
Ergooyin la soo uruuriyo,fasax ahaanna u qaata meesha la aadayo. Sidaas waxaa kaalinta uga baxa waxgaradkii lafagurilahaa dhibaatooyinka soomaalida heysta, saabina lahaa qaabkii lagu wada xaajoon lahaa, unkina lahaa gaawihii lagu shubilahaa heshiis nabadda waartya iyo caanaha lagu gaarayo.
Ku tiirsanaanta dhaqaalaha ay bixiyaan shisheeyahu, oo ku xiran shuruudo adag,
midnimo la`aanta iyo tuhunka ah cidbaa sad bursaneysa ama cid baa cid kale dabadhilif u ah.
Waxuu kaga duwan yahayse shirarkii hore
Shirku waxuu ku soo beegmay xili ay dacalada adduunka ay qeylo ka yeerayso, gaar ahaana dalalka ay ku nool yihiin shucuubta heysata diinta Islaanka.
Waxaa lagu qabanayaa gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaala madaxdii dalka.
Hase yeeshee shirka maalmahu ka harsan yihiin qabashadiisa, waxaa jira arimo badan oo aan la dheyelsan Karin walina xasaasi ah ee ka soo horjeeda qabashada shirkaan:
koonfurta Soomaliya waxaa ka soo cusboonaaday dagaaladii sokeeye, maalinkasta dhiig ku daadanayo, barakac iyo burburinta hantidii ummadda, mid guud iyo mid gaar ahba,
Iyada oo ay jiraan mucaarad diidan qabashada shirkaan,
Xili ay dalka joogaan ciidamo shisheeye ah, gaar ahaan Itoobiyaanka oo shacabka Soomaaliyeed aysan isku si u arag ujeedada dhabta ah ee dawladu ka leedahay joogitaankooda,
Waxgaradka Soomaaliyeed oo mugdi ka galay meesha ay u socdaan arrimaha Soomaalia.
Iyo culeys weyn oo ka imaanaya dibbada kaas oo dedejinaya bal in shirku furmo wakhtigii la sheegay, hase yeeshee aan dan ka la heyn natiijo fiican oo ka soo baxdo.
Duruufahaan oo jira haddana afhayeenka guddiga qaban qaabada shirku waxuu sheegay in ergooyinkii shirka la bilaabay daabulaadoodii, ayna diyaarsan yihiin goobtii iyo meelihii ay degilahaayeen. Hase yeeshee gobollada dalka qaar bay ka socdaan isu diyaarin shirkaan. kulankaas ayaa ergooyinkaasi masuuliyiinta gobolladasi u rajeynayaan inay noqdaan kuwo ka soo baxa waajibaadka culus ee ah matalidda beelahooda.
Markii dhinac kasta laga istaago, miisaana la saaro qabashada shirkaan waxay u muuqataa mid aan macquul aheyn. Sababna waxaa u ah arimaha aan kor ku soo xusay. Haddiise meel aan xubin aheyn midida la mariyo, markale waxaan suuragal noqanaheyn in shirkaas uu ka turjumo baahida jirta, haddii ayen istaagin dagaaladu,lana wada garan baajinta dhiiga maalinkasta daadanaya.
Waxaa looga baahan yahay shirka looga hadlayo dib-u-heshiisiinta soomaalida,in si fiican looga soo baaraan dego, loona sameeyo qorshe qeexaaya:
Muddada shirku furmayo iyo markuu xirmaayo,
Ergooyinkooda waayo-aragnimo siyaasadeed leh in la soo xulo, maadaama khilaafaadka ummadda Soomaaliyeed shilalka saaray ay ku saleysan yihiin siyaasiyiin hardamay oo beelahoodii si khaldan wax ugu sheegay.
In la qodobeeyo maxay yihiin dhibaatooyinka jiraa ee laga wada hadlayaa,
Xog uruurin ku saleysan siyaalihii xal loogu helilahaa dhibaatooyinkii la soo sheegay, oo ay soo diyaarinyaan guddiga qabanqaabadu maadaama ay kala matalayaan deegaamada wada xaajoonaya,
Intaas oo dhan ka dib ayaa shirku furmikaraa.
Arini si kasta oo ay noqoto shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan waxay baahi weyn u qabaan sharaftii qarannimo, midnimo, nadabgelyo iyo in laga heshiiyo colaaddii sokeeye, ee kaalinta weyn ay ka qaateen siyaasiyiin, dawlado iyo shirkaddo shisheeye ah oo danahooda ilaashanaya.
shakib | shakib_dhowre@hotmail.com